Iindaba-Umgca weR & D woluhlu lwemveliso yeRainpoo
Iindaba eziManyanisiweyo Itekhnoloji yeRainpoo
Umgca we-R & D woluhlu lwemveliso yeRainpoo
Ngokwaziswa kobude obugxile ekuchaphazeleni iziphumo ze-3D, unokuba nokuqonda kwangaphambili konxibelelwano phakathi kobude obugxile kwi-FOV. Ukusuka ekubekweni kweeparameter zokubhabha ukuya kwinkqubo yokumodareyitha ye-3D, ezi paramitha zimbini zihlala zinendawo yazo. Ke ziziphi iimpembelelo ezinazo ezi paramitha zimbini kwiziphumo ze-3D? Kweli nqaku, siza kwazisa indlela uRainpoo alufumene ngayo unxibelelwano kwinkqubo yemveliso ye-R & D, kunye nendlela yokufumana ibhalansi phakathi kwempikiswano phakathi kokuphakama kwendiza kunye nesiphumo semodeli ye-3D.
1, Ukusuka kwi-D2 ukuya kwi-D3
I-RIY-D2 yimveliso eyenzelwe ngokukodwa iiprojekthi zophando ze-cadastral. Ikwayikhamera yokuqala ye-oblique eyamkela uyilo olwehlayo kunye nelensi yangaphakathi. I-D2 inokuchaneka kokumodareyitha okuphezulu kunye nomgangatho olungileyo wokumodareyitha, ofanelekileyo kwimodeli yokubonisa enomhlaba othe tyaba kwaye hayi imigangatho ephezulu kakhulu. Nangona kunjalo, ukulahla okukhulu, umhlaba ontsonkothileyo kunye nokuma komhlaba (kubandakanya imigca enevolthi ephezulu, iitshimini, izitishi ezisisiseko kunye nezinye izakhiwo eziphakamileyo), ukhuseleko lwendiza yedrone luya kuba yingxaki enkulu.
Kwimisebenzi yokwenyani, abanye abathengi khange bacwangcise ukuphakama kwendiza elungileyo, ebangele ukuba idrone ixhome imigca ye-voltage ephezulu okanye ibethe isikhululo sesiseko; Okanye nangona ezinye iidrones zazinethamsanqa ngokwaneleyo lokudlula kwiindawo ezinobungozi, zafumanisa kuphela ukuba iidrones zazisondele kakhulu kwiindawo ezinobungozi xa zijonga iifoto zomoya .. Ezi ngozi kunye neengozi ezifihlakeleyo zihlala zibangela ilahleko enkulu yepropathi kubathengi.
Isikhululo sesiseko sibonisa kwifoto, uyabona ukuba sisondele kakhulu kwidrone, kunokwenzeka ukuba ibethe kuyo Ke ngoko, abathengi abaninzi basinike iingcebiso: Ngaba ikhamera egxile kubude be-oblique inokuyilwa ukwenza ukuphakama kwendiza yedrone ephezulu kwaye yenze ukuba indiza ikhuseleke? Ngokusekwe kwiimfuno zabathengi, ngokusekwe kwi-D2, siphuhlise ubude bexesha elide eligama lingu-RIY-D3. Xa kuthelekiswa ne-D2, kwisisombululo esinye, i-D3 inokunyusa ukuphakama kwendiza yedrone malunga ne-60%.
Ngexesha le-R & D ye-D3, besisoloko sikholelwa ukuba ubude obude ekugxilwe kubo bunokuphakama okuphezulu kwendiza, umgangatho wobunjineli obumgangatho kunye nokuchaneka okuphezulu. Kodwa emva kokusebenza kanye, safumanisa ukuba bekungekho njengoko bekulindelekile, thelekisa i-D2, imodeli ye-3D eyakhiwe yi-D3 ibixinekile, kwaye ukusebenza kakuhle bekusezantsi.
Igama I-Riy-D2 / D3
Ubukhulu Ngo-190 * 180 * 88mm
Uhlobo woluvo I-APS-C
CMOS ubungakanani 23.5mm × 15.6mm
Ubungakanani bePixel 3.9um
Iiphikseli zizonke I-120MP
Ixesha elincinci lokuvezwa kwexesha 1s
Imowudi yokuboniswa kwekhamera Ukubonakaliswa kwe-Isochronic / Isometric
ubude obugxile 20mm / 35mm ye-D235mm / 50mm ye-D3
Ukunikezwa Amandla Unikezelo lweeyunifomu (Amandla edrone)
amandla ememori 320G
Ukukhuphela idatha kudlulisiwe ≥70M / s
Ubushushu bomsebenzi -10 ° C ~ + 40 ° C
Uhlaziyo lweFirmware Simahla
Ixabiso le-IP IP IP Uluhlu 43
2, Unxibelelwano phakathi kobude obugxile kunye nomgangatho wokubonisa
Unxibelelwano phakathi kobude bokugxila kunye nomgangatho wokumodareyitha akukho lula kubathengi abaninzi ukuba bayiqonde, kwaye uninzi lweekhamera ze-oblique ngempazamo zikholelwa ukuba iilensi ezinde zobude ziluncedo ekumodeliseni umgangatho.
Eyona meko ilapha yile: kwisiseko sokuba ezinye iiparameter ziyafana, kulwakhiwo olungaphambili lwesakhiwo, kokukhona ubude bembono, kokukhona ukulingana kwemodeli. Luhlobo luni lolwalamano olusengqiqweni olubandakanyekileyo apha?
Kwi-artical yokugqibela Ubude obugxile ekuchaphazeleni iziphumo ze-3D sitshilo ukuba:
Ngaphantsi kwesiseko sokuba ezinye iiparameter ziyafana, ubude obugxile ekuchaphazeleni kuphela ubude bokuhamba. Njengoko kubonisiwe kulo mzobo ungasentla, zimbini iilensi ezijolise ngokungafaniyo, bomvu bubonisa ilensi ende egxile, kwaye okwesibhakabhaka kubonisa ilensi emfutshane yokujonga. I-engile ephezulu eyenziwe yilensi ende yokujonga kunye nodonga yi-α, kunye ne-engile ephezulu eyenziwe yilensi emfutshane yokujonga kunye nodonga ngu-β. Ngokucacileyo:
Ithetha ntoni le "engile"? Eyona mkhulu i-engile phakathi komda we-FOV yelensi kunye nodonga, kokukhona i-lens ethe tyaba ngakumbi eludongeni. Xa uqokelela ulwazi kulwakhiwo lwee-facade, iilensi ezimfutshane ezijolise kuyo zinokuqokelela ulwazi lodonga ngokuthe tye, kwaye iimodeli ze3D ezisekwe kuyo zingabonisa ngcono ubume be-facade. Ke ngoko, kwimiboniso enefacade, mfutshane ubude beelensi, ngakumbi ulwazi oluqokelelweyo lwe-facade kunye nomgangatho ongcono wokumodareyitha.
Kwizakhiwo ezinama-eaves, phantsi kwemeko efanayo yesisombululo somhlaba, kokukhona ubude beelensi bude, ukuphakama kwendiza yokuhamba ngenqwelomoya, kokukhona amabala angaboniyo phantsi kwe-eaves, emva koko umgangatho wokumodareyitha uya kuba mbi. Ke kule meko, i-D3 ene-lens ekugxilwe kuyo ende ayinakukhuphisana ne-D2 ngelensi emfutshane yokujonga.
Ukungqubana phakathi kobude bendiza yedrone kunye nomgangatho wemodeli ye3D
Ngokunxibelelana kwengqondo yokujonga ubude kunye nomgangatho wemodeli, ukuba ubude belensi bufutshane ngokwaneleyo kwaye i-FOV angle inkulu ngokwaneleyo, akukho khamera yeelensi ezininzi efunekayo kwaphela. Iilensi zekona ebanzi ebanzi (ilensi yeliso lentlanzi) inokuqokelela ulwazi lwazo zonke iindlela. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Akulungile ukuyila ubude beelensi obufutshane kangangoko kunokwenzeka?
Ungayichazanga ingxaki yokugqwetha okukhulu okubangelwa bubude obugqithisileyo obufutshane. Ukuba ubude be-lens ye-ortho yekhamera ye-oblique yenzelwe ukuba ibe yi-10mm kwaye idatha iqokelelwa kwisisombululo se-2cm, ukuphakama kwendiza yedrone ziimitha ezingama-51 kuphela.
Ngokucacileyo, ukuba i-drone ixhotyiswe ngekhamera ye-oblique eyilelwe ngale ndlela ukwenza imisebenzi, ngokuqinisekileyo iya kuba yingozi.
I-PS: Nangona iilensi ze-engile ebanzi inokusetyenziswa okungacacanga kwemodeli yokufota ye-oblique, inokubaluleka kokumodareyitha kweLidar. Ngaphambili, enye inkampani edumileyo yaseLidar yayikhe yanxibelelana nathi, ngethemba lokuba siyila ikhamera yeenqwelomoya ebanzi, ekhwele kunye neLidar, ukutolikwa kwento yomhlaba kunye nokuqokelelwa kwemvakalo.
4, Ukusuka kwi-D3 ukuya kwi-DG3
I-R & D ye-D3 isenze saqonda ukuba kwiifoto ze-oblique, ubude bembonakalo abunakuba bude bude okanye bufutshane. Ubude buhambelana kakhulu nomgangatho wemodeli, ukusebenza kakuhle, kunye nokuphakama kwendiza. Ke kwi-R & D yelensi, umbuzo wokuqala omele ukuthathelwa ingqalelo ngulo: ubucwangcisa njani ubude beelensi?
Nangona kugxilwe kufutshane kunomgangatho olungileyo wokumodareyitha, kodwa ukuphakama kwendiza kusezantsi, akukhuselekanga ngendiza yedrone. Ukuqinisekisa ukhuseleko lweedrones, ubude bokujonga kufuneka benziwe ixesha elide, kodwa ubude obude obude buza kuchaphazela ukusebenza ngokukuko kunye nomgangatho wokumodareyitha. Kukho ukungqubana okuthile phakathi kobude beenqwelomoya kunye nomgangatho we-3D. Kuya kufuneka sifune ulungelelwaniso phakathi kwezi zinto ziphikisanayo.
Ke emva kwe-D3, ngokusekwe kuqwalaselo olubanzi lwezi zinto ziphikisanayo, siphuhlise ikhamera ye-DG3 oblique. I-DG3 ithathela ingqalelo zombini umgangatho we-3D yokumodareyitha ye-D2 kunye nokuphakama kwendiza ye-D3, ngelixa yongeza inkqubo yokususa ubushushu kunye nenkqubo yokususa uthuli, ukuze isetyenziselwe iphiko elimiselweyo okanye i-VTOL drones. I-DG3 yeyona camera idumileyo ye-oblique yeRainpoo, ikwayikhamera ye-oblique esetyenziswa kakhulu kwintengiso.
Ubukhulu 170 * 160 * 80mm
Ubungakanani beCCD 23.5mm × 15.6mm
Ixesha elincinci lokuvezwa kwexesha 0.8s
ubude obugxile 28mm / 40mm
amandla ememori Ngama-320 / 640G
Ukukhuphela idatha kudlulisiwe ≥80M / s
5, Ukusuka kwi-DG3 ukuya kwi-DG3Pros
Iikhamera ze-RIY-Pros ze-oblique ezinokufezekisa umgangatho wobunjineli. Ke loluphi uyilo olukhethekileyo olunokuthi iiProses zinalo kubume beelensi kunye nokuseta ubude bokugxila? Kule ngxaki, siya kuqhubeka nokwazisa uyilo-logic ngasemva kweeprosesa zePros.
I-6, i-angle ye-lens ye-Oblique kunye nomgangatho wokubonisa
Umxholo wangaphambili ukhankanye umbono onje: mfutshane ubude obugxile, ikona enkulu yeembono, ulwazi olungaphezulu kwesakhiwo lunokuqokelelwa, kwaye ngcono umgangatho wokumodareyitha.
Ukongeza ekumiseleni ubude obufanelekileyo bokujonga, ewe, sinokusebenzisa enye indlela yokuphucula ukusebenza kwemodeli: Yandisa ngokuthe ngqo i-engile yeelensi ze-oblique, ezinokuthi ziqokelele ulwazi oluninzi olungaphezulu.
Kodwa enyanisweni, nangona ukuseta i-oblique engile enkulu kunokuphucula umgangatho wemodeli, kukho iziphumo ebezingalindelekanga ezimbini:
1: Ukusebenza ngokukuko kuya kuncitshiswa. Ngokunyuka kwe-engile ye-oblique, ukwandiswa kwangaphandle kwendlela yokuhamba ngenqwelomoya kuya kukonyusa kakhulu. Xa i-engile ye-oblique ingaphezulu kwe-45 °, ukusebenza ngokukuko kwendiza kuya kwehla kakhulu.
Umzekelo, ikhamera yobuchwephesha bobuchwephesha iLeica RCD30, yi-oblique angle yi-30 ° kuphela, esinye sezizathu zoyilo kukonyusa ukusebenza ngokukuko.
2: Ukuba i-engile ye-oblique inkulu kakhulu, ukukhanya kwelanga kuya kungena ngokulula kwikhamera, kubangele ilitha (ngakumbi kusasa nasemva kwemini engacacanga). Ikhamera yeRainpoo oblique yeyona yokuqala ukwamkela uyilo lwangaphakathi-lens. Olu luyilo lilingana nokongeza i-hood kwiilensi ukuyikhusela ekuchaphazelweni lilanga le-oblique.
Ngokukodwa kwiidrones ezincinci, ngokubanzi, izimo zengqondo zokubhabha ziphantsi. Emva kokuba i-lens oblique angle kunye nesimo sengqondo se-drone siphezulu, ukukhanya okulahlekileyo kungangena ngokulula kwikhamera, kuqhubeke nokwandisa ingxaki yelitha.
7, Indlela overlap kunye nomgangatho modelling
Ngokwamava, ukuze kuqinisekiswe umgangatho wemodeli, kuyo nayiphi na into esemajukujukwini, kungcono ukugubungela ulwazi lokuvela kwamaqela amahlanu eelensi ngexesha lokubhabha.
Kulula ukuyiqonda le nto. Umzekelo, ukuba sifuna ukwakha imodeli ye-3D yesakhiwo sakudala, umgangatho womzekelo wokubhabha kwesangqa kufuneka ubengcono kakhulu kunomgangatho wokuthatha imifanekiso embalwa kumacala amane.
Iifoto ezigutyungelweyo ngaphezulu, ulwazi olungaphezulu lweendawo kunye nolwakhiwo oluqulathiweyo, kunye nomgangatho ongcono wokungcono. Le yintsingiselo yendlela yokuhamba ngenqwelomoya ehamba ngaphezulu kweefoto ze-oblique.
Iqondo lokugqagqana yenye yezinto eziphambili ezimisela umgangatho wemodeli ye-3D. Kwimeko yokufotwa kwe-oblique, iqondo lokugqagqana ikakhulu liipesenti ezingama-80 kunye nama-70% ecaleni (eyona datha ayifuneki).
Ngapha koko, kufanelekile ukuba ube nenqanaba elifanayo lokungqamana kwicala, kodwa ukulala okuphezulu kakhulu kuya kunciphisa kakhulu ukusebenza kwenqwelomoya (ngakumbi iidrones ezinamaphiko amileyo), ngokusekwe ekusebenzeni kakuhle, amacala ngokubanzi aya kuba sezantsi kunokuba ukungqubana kwesihloko.
Iingcebiso: Ukuthathela ingqalelo ukusebenza ngokukuko, isidanga esigqithisanayo asiphezulu kangako. Emva kokugqitha "kumgangatho" othile, ukuphucula isidanga sokugqagqana kunefuthe elilinganiselweyo kwimodeli ye-3D. Ngokwengxelo yethu yovavanyo, ngamanye amaxesha ukonyusa ukugqagqana kuya kunciphisa umgangatho wemodeli. Umzekelo, kwi-3 ~ 5cm yesimo sokubonisa imodeli, umgangatho wokumodareyitha wesidanga esigqibeleleyo esisezantsi ngamanye amaxesha ungcono kunesidanga esigqithileyo sokugqagqana.
8, umahluko phakathi kokungqamana ithiyori kunye nokungqamana kanye
Ngaphambi kwenqwelomoya, saseta isihloko esingama-80% kunye nama-70% ecaleni kwendlela, eyinto nje edlulayo yethiyori. Kwindiza, idrone iya kuchaphazeleka kukuhamba komoya,kunye notshintsho kwisimo sengqondo luya kubangela ukuba ukugqagqana okwenyani kube kuncinci kunokwakheka kwethiyori.
Ngokubanzi, nokuba yirotor ye-multi-rotor okanye iphiko elingashukumiyo, ihlwempuzekile kwisimo sengqondo sokubhabha, imeko yomgangatho we-3D imbi kakhulu. Ngenxa yokuba iirotor ezincinci okanye iidrones ezinamaphiko amiselweyo zilula kubunzima kwaye zincinci ngobukhulu, zinokuphazanyiswa kukuhamba komoya kwangaphandle. Isimo sabo sokubhabha ngokubanzi asilunganga njengaleyo yaphakathi / enkulu yeerotor ezininzi okanye iidrones ezinamaphiko amileyo, okukhokelela kwisidanga sokugqagqana kwindawo ethile yomhlaba othile ayonelanga, ethi ekugqibeleni ichaphazele umgangatho wemodeli.
9, Ubunzima kwimodeli ye-3D yezakhiwo eziphakamileyo
Njengokuba ukuphakama kwesakhiwo kusonyuka, ubunzima bemodeli ye3D buya kwanda. Enye yeyokuba isakhiwo esonyuka kakhulu siya kwandisa umngcipheko wokubaleka kwe-drone, kwaye okwesibini kukuba njengoko ukuphakama kwesakhiwo kusonyuka, ukugqagqana kwamacandelo aphakama kakhulu kwehla kakhulu, kukhokelela kumgangatho ombi we-3D.
1 Impembelelo yokwanda kokuDlulela kwi 3D Umgangatho woKwakha weSakhiwo esiphakamileyo
Kule ngxaki ingentla, abathengi abaninzi abanamava basifumene isisombululo: yonyusa inqanaba lokudibana. Ewe, ngokunyuka kwenqanaba lokungqubana, umphumo weemodeli ziya kuphuculwa kakhulu. Oku kulandelayo kukuthelekiswa kovavanyo esilwenzileyo:
Ngolu thelekiso lungentla, siya kufumanisa ukuba: ukunyuka kwenqanaba lokugqagqana kunefuthe elincinci kumgangatho wokubonisa wezakhiwo ezisezantsi; kodwa inefuthe elikhulu kumgangatho wemodeli yezakhiwo eziphakamileyo.
Nangona kunjalo, njengoko inqanaba lokugqabhuka kokunyuka linyuka, inani leefoto zasemoyeni ziya kunyuka, kunye nexesha lokuqhutywa kwedatha nalo liya kwanda.
2 Impembelelo ubude obugxile ivuliwe 3D Umgangatho woKwakha weSakhiwo esiphakamileyo
Senze eso sigqibo kumxholo odlulileyo:Kuba Ukwakhiwa kwe-facade 3D Iimpawu zemodeli, kokukhona ubude bembonakalo, imodeli imbi kakhulu umgangatho. Nangona kunjalo, kwimodeli ye-3D yeendawo eziphakamileyo, ubude obude obude buyafuneka ukuze kuqinisekiswe umgangatho wemodeli. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Ngaphantsi kweemeko zesisombululo esinye kunye nedigri egqagqeneyo, iilensi ezinde zobude bokuqinisekisa ukuba inqanaba lokugquma kophahla kunye nobude obukhuselekileyo bokuhamba ngenqwelomoya ukufezekisa umgangatho wobunjineli bezakhiwo eziphakamileyo.
Umzekelo, xa ikhamera ye-DG4pros oblique isetyenziselwa ukwenza imodeli ye-3D yezakhiwo eziphakamileyo, ayikwazi kuphela ukufezekisa umgangatho wokumodareyitha, kodwa ukuchaneka kunokufikelela kwi-1: 500 yeemvavanyo zecadastral, eziluncedo kugxilwe olude iilensi zobude.
Ityala: Ityala eliphumelelayo lokufotwa kwe-oblique
Iikhamera ezili-10 ze-RIY-Pros ze-oblique
Ukufezekisa umgangatho wokumodareyitha ongcono, phantsi kwesisombululo esinye, kufuneka kuqinisekiswe ukugqagqana okwaneleyo kunye nemimandla emikhulu yokujonga. Kwimimandla enendawo eyahlukileyo yokuphakama komhlaba okanye izakhiwo eziphakamileyo, ubude belensi into ebalulekileyo echaphazela umgangatho wemodeli. Ngokusekwe kule migaqo ingentla, i-Rainpoo RIY-Pros yeekhamera ze-oblique zenze ezi zinto zintathu zilungiselelwe ilensi:
1 Guqula ubeko lwelenises
Kwiikhamera ezilandelelanayo zeekhamera ze-oblique, olona luvo lunomdla kukuba imeko yayo iyatshintsha ukusuka kumjikelo uye kwisikwere. Esona sizathu sithe ngqo solu tshintsho kukuba ubume beelensi butshintshile.
Uncedo lolu lwakhiwo kukuba ubungakanani bekhamera bunokuyilwa buncinci kwaye ubunzima bunokuba lula. Nangona kunjalo, olu lwakhiwo luya kukhokelela ekubeni iilensi ezigqagqeneyo zeelensi ezisekhohlo nasekunene zisezantsi kunaleyo yangaphambili, embindini, kunye nembono yangasemva: Oko kukuthi, indawo yesithunzi A incinci kunendawo yesithunzi B.
Njengokuba besesitshilo ngaphambili, ukwenzela ukuphucula ukusebenza kakuhle kwenqwelomoya, ukugqagqana kwamacala ngokubanzi kuncinci kunokongamela kwesihloko, kwaye oku "kubume bungqongqo" kuya kunciphisa ukugqobhoza ecaleni, yiyo loo nto imodeli ye-3D esecaleni izakuba ihlwempu kunesihloko se-3D imodeli.
Ke kuthotho lwe-RIY-Pros, iRainpoo itshintshe ubume beelensi ukuba: kulungelelwaniso olufanayo. Njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Olu luhlu luya kunikela ngenxalenye yobume kunye nobunzima, kodwa inzuzo kukuba inokuqinisekisa ukuba iindawo ezaneleyo zihamba kunye nokufezekisa umgangatho ongcono. Kwisicwangciso sokuhamba ngenqwelomoya, i-RIY-Pros inokunciphisa ukugqobhoza ecaleni kwelinye icala ukuphucula ukusebenza kwendiza.
2 Lungisa i-engile ye oblique lenses
Uncedo "lolungelelwaniso olufanayo" kukuba ayiqinisekisi kuphela ukuhlangana okwaneleyo, kodwa ikwonyusa icala le-FOV kwaye inokuqokelela ulwazi ngakumbi lolwakhiwo lwezakhiwo.
Kwesi siseko, sikwandisile ubude obugxile kwiilensi ze-oblique ukwenzela ukuba umda wayo ongezantsi ungqamane nomda osezantsi wolwakhiwo lwangaphambili "lobeko olujikelezileyo", ukwandisa ngakumbi umbono wecala, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo:
Uncedo lolu lwakhiwo kukuba nangona i-engile yeelensi ze-oblique itshintshiwe, ayichaphazeli ukusebenza kwendiza. Kwaye emva kokuba i-FOV yeelensi ezisecaleni iphuculwe kakhulu, kunokuqokelelwa idatha yolwazi olungaphezulu, kwaye umgangatho wemodeli uyaphuculwa.
Uvavanyo lokwahlulahlula lukwabonisa ukuba, xa kuthelekiswa nolwakhiwo lwendabuko lweelensi, ubume boluhlu lweePros bunokuwuphucula ngokwenene umgangatho weemodeli ze3D.
Ikhohlo yimodeli ye-3D eyakhiwe yikhamera yoyilo yemveli, kwaye ngasekunene yimodeli ye-3D eyakhiwe yikhamera ye-Pros.
3 Yandisa ubude obugxile kwi Iilensi ze-oblique
Iilensi zeekhamera ze-RIY-Pros oblique zitshintshiwe ukusuka kwindalo “ejikelezileyo” ukuya “kulungelelwaniso olufanayo”, kunye nomyinge wesisombululo esikufutshane nesisombululo esisekude kweefoto ezithathwe ziilensi ze-oblique ziya kwanda.
Ukuqinisekisa ukuba umyinge awugqithi kwixabiso elibalulekileyo, ii-lens ze-oblique lens ezijolise kubude zonyuswe nge-5% ~ 8% kunangaphambili.
Igama I-Riy-DG3 Pros
Ubukhulu 130 * 142 * 99.5mm
ubude obugxile 28mm / 43mm
amandla ememori 640G